25 Jolay 2020 - FJKM Québec - Canada
25 Jolay 2020
24 juillet 2020 by FJKM-QUEBEC
Ny fanafahana ny rahalahy
JEREMIA 34 : 8-11
34:8 Izao no teny tonga tamin’ i Jeremia avy tamin’ i Jehovah, rehefa nanao fanekena tamin’ ny vahoaka rehetra izay tany Jerosalema Zedekia mpanjaka hitory fanafahana aminy,
34:9 Mba samy handefa ny mpanompolahiny sy ny mpanompovaviny ny olona, dia izay Hebreo lahy na Hebreo vavy, ho afaka mba tsy hisy hampanompo ny Jiosy rahalahiny intsony.
34:10 Koa rehefa nanaiky ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra izay nanao ny fanekena fa samy tokony handefa ny mpanompolahiny sy ny mpanompovaviny ho afaka mba tsy hampanompoany azy intsony; dia nankatò izy ka nandefa azy ireo ho afaka.
34:11 Kanjo taorian’ izany dia nanenina izy, ka naveriny indray ireo mpanompolahy sy mpanompovavy izay efa nalefany ho afaka ireo, dia nandevoziny ho mpanompolahy sy mpanompovavy indray.
« Izao no teny tonga tamin’ i Jeremia avy tamin’i Jehovah…tsy hisy hampanompo ny Jiosy rahalahiny intsony » (and8,9) .
Tamin’ny andron’i Zedekia , mpanjakan’ny Joda , mialoha kelin’ny fahababoana no tonga tamin’i Jeremia ny baikon’Andriamanitra , ary nampitaina tamin’i Zedekia mpanjaka ho fanafahana ny Jiosy andevon’ny Jiosy izay andevozin’ny Jiosy rahalahiny ihany . Neken’ny mpanjaka izany ary nampitaina tamin’ny mpanapaka rehetra satria baikon’Andriamanitra . Araka izany , baikon’Andriamanitra ny fanafahana ny rahalahy amin’ny fanandevozana , indrindra eo amin’ny samy vahoakan’Andriamanitra . Manome fianarana ho antsika Andriamanitra tamin’ny nanomezany an’iJesoa Kristy hanafaka antsika.
2-Fihazonana ny fanekena
« eny manaiky izy ka samy nandefa azy ho afaka , kanjo taorian’izany dia nanenina izy… » (and10,11)
Efa nanao fanekena ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka fa hanafaka ny rahalahiny amin’ny fanandevozana ka efa nandefa azy ireo .Taty aoriana anefa , dia nanenina tamin’ny fanafahana ny rahalahiny tsy ho andevo izy ireo ka namerina azy indray ho andevo .Tsy nitana ny fanekena nataony , sady nandà ny baikon’Andriamanitra azy ireo . Noho izany , aoka ho marina amin’ny fanekena atao ho fanafahana ny rahalahy, indrindra fa raha efa nekena teo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona izany . Mitana ny fanekena ataony Ilay Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy ka izay mabompo Azy dia tsy maintsy mitana ny fanekena nataony .
Impiry ianao na efa nanao fanekena ? Manao ahoana ny fampiharanao izany eo amin’ny fiainanao?